Safal Khabar - अब हावाबाटै चल्ने भयो बाइक
शनिबार, ०२ कार्तिक २०७६ (Saturday, 19 October, 2019)
अब हावाबाटै चल्ने भयो बाइक
शुक्रबार, २० असार २०७६, २१ : ४८
एजेन्सी । ट्यांकीमा पेट्रोल होइन हावा भरेर हावाबाटै चल्न बाइकको आविष्कार गरिएको छ । भारत लखनउका एक वैज्ञानिकले एअर बाइकको आविष्कार गरेका हुन् । उनले करिब ९ वर्ष पहिला एउटा एअर इन्जनको आविष्कार गरेका थिए । जुन अहिले आएर एअर बाइकको रुप लिएको छ । यो आविष्कारले बढ्दो ग्लोबल वार्मिङ समस्यासँगै आम मानिसको कम खर्चमा बाइक चढ्ने रहर पूरा गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
एअर बाइक तयार गर्ने वैज्ञानिकको विश्वास छ कि यो बाइक सञ्चालनमा ल्याउन सके इन्धनको खपत पनि कम हुनेछ र ग्लोबल वार्मिङको समस्या पनि कम हुँदै जानेछ । उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगमका मुख्य महाप्रबन्धक रहिसकेका भारतराज सिंहले हावाको ऊर्जाबाट चल्ने यो बाइक निर्माण गरेका हुन् । उनले यो आविष्कारमा निकै मेहनत गरेका छन् ।
उनी हाल एउटा इन्जिनियरिङ कलेजमा एसोसिएट डाइरेक्टर छन् । उनलाई विश्वास छ कि यदि उनको यो आविष्कार सञ्चालनमा आए प्रदूषण ५० प्रतिशतले घट्नेछ । यो आविष्कारको मुख्य उद्देश्य भनेको गाडीमा पेट्रोल वा डिजल प्रयोग गर्नुको साटो तिनलाई हावाबाट चल्न इन्जिन तयार पार्नु नै हो । यो इन्जिन तयार पार्न हाल धेरै खर्च लागेको छ ।
वैज्ञानिक सिंहका अनुसार उनी आफैँले एउटा आल्मुनियमको सिलिन्डर बनाएर त्यसलाई जडान गरेर हावाबाट चल्ने इन्जिन बनाएका छन् । त्यो इन्जिनको प्रयोग पहिला उनले बाइकमा गरे । जुन निकै सफल रह्यो । सिंहका अनुसार यो इन्जिन जडान गरेर चलाइएको बाइकले केबल ५ रुपैयाँमा ४० किलोमिटरको यात्रा आरामले सफर गर्न सकिन्छ । हावाबाट चल्ने इन्जिनले बाइकको गतिमा खासै नकारात्मक असर पारेन । यो इन्जिनिजडित बाइक प्रतिघन्टा ७०–८० को गतिमा सजिलै चलाउन सकिन्छ । सिंहले आफ्नो यो आविष्कारलाई वैधानिकता दिन भारत सरकारसमक्ष पत्र पठाएका छन् ।
यी ६ कुराहरु लुकाउने गर्छन् महिलाहरुले पुरुषसंग
नेपाली समाजमा महिलालाई पेटमा कुरा अड्याउन नसक्ने जातका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले गोप्य वा अप्ठ्यारो कुरा...
वैज्ञानिकले पहिलो पटक पानी भएको ग्रह पत्ता...
मुकेश अम्बानीकी श्रीमती नीताको सारी, जुन ‘गिनीज वल्र्ड रेकर्ड’ मा दर्ता भयो
व्यवसायी अर्थात एसियाकै सबैभन्दा धनिको सूचिमा रहेका...
नीता अम्बानीले पिउँछिन् ३ लाख रुपैँयाको चिया, दैनिक खर्च कति ?
एशियाकै सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बनीकी श्रीमती नीता...
महराविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले यसरी पोखे आक्रोश
नेकपाको चियापानमा नेम्वाङलाई सकस
पश्चिम नेपालमा बस्यो विप्लवको हेडक्वार्टर बैठक
१. पैसा पचाउन गाह्रो
२. अर्को वर्ष हिउँदमा वाग्मतीमा स्वच्छ पानी
३. राजावादी नायिका सुष्मा !
४. दुर्घटनामा प्रहरी जवानको मृत्यु
५. रियालिटी चेकः ओभर कन्फिडेन्टले डुबे प्रतियोगी
६. साकार हुँदै वाग्मतीमा स्वच्छ पानी बगाउने सपना
७. जुजुभाईको अनुभवः जतिसुकै पिडा होस् तर रगत नबगोस्
८. बस दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते
९. जेसिज विकास रनिङ शिल्ड : एपीएफ विजयी, झापा ११ ट्राईबेकरमा स्तब्ध
१. महराविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले यसरी पोखे आक्रोश
२. नेकपाको चियापानमा नेम्वाङलाई सकस
३. पश्चिम नेपालमा बस्यो विप्लवको हेडक्वार्टर बैठक
४. सी चीन फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरे यस्तो ट्विट
५. तीन सांसद निलम्बित, अर्का पनि छानबिनकाे घेरामा
६. चिनियाँ राष्ट्रपति सीले प्रचण्डलाई भने,– ‘तपाई भेट्रान राजनेता’
७. उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलले किन भुले मर्यादा ?
Editor: Bijan Shrestha